ဒီ client ကကျွန်တော်တို့ကို Alibaba ကနေတွေ့ပြီ။ သူမသည်အစိုးရအတွက်မီးခံလုံခြုံမှုသေတ္တာကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
သူမသည် FireProof ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေတ္တာ၏အမေရိကန်ဓာတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုပို့ခဲ့သည်။ သူတို့က 10PCs အကြီးစားဘေးဒဏ်ခံနိုင်သည့်သေတ္တာကြီးများကို Rotary platform နှင့် 25pc အရွယ်အစားမီးသက်ဆိုင်အန္တရာယ်ရှိသေတ္တာများဖြင့်ကြီးမားသောမီးသတ်ဆေးသေတ္တာများဖြင့်လိုချင်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အညီရေးဆွဲခြင်းကို ဦး စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးသိုက်လက်ခံရရှိပြီးနောက်အတည်ပြုချက်များအတွက်နမူနာတစ်ခုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နမူနာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
သူတို့လုံခြုံမှုသေတ္တာကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ client ကိုကျေနပ်သည်။ သူတို့နောက်စီမံကိန်းအတွက်သူတို့ကအသစ်သောအမိန့်အသစ်ကိုချထားပါလိမ့်မယ်။
Foshan Weierxin သည် ပိုမို. ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်လုံခြုံရေးအကွက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။
3. လက် မင်းကထုတ်လုပ်သူဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ပါ။
4. OO စက်ရုံသည် ISO 9001 ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
2004 ခုနှစ်မှစ. Foshan Woshan Woshan Woshan City တွင် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်0န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည်မီးလောင်ရာများ, ရုံးလုံခြုံမှု, ဟိုတယ်များ, သေနတ်များ, သေနတ်များ, စီ။ အီး။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ 500,000 ကျော်ဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုအိမ်, ရုံး, ကျောင်း, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည့်နယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအများဆုံးအသိအမှတ်ပြုခံရ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များတွင်အကောင်းဆုံးအတန်းအစားတန်ဖိုး, အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, Weierxin Safe တွင်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်သူ 1000 ကျော်နှင့်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်းကမ္ဘာအနှံ့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်အများအပြား၏ oem ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်မှစ. ထုတ်ကုန်များကိုအစဉ်အမြဲအကောင်းမြင်ပြီးတိုးတက်လာပြီးပိုမိုများပြားသောအသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာရန်နေတုန်းပဲ။ ကောင်းမွန်သော OEM နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်& OMD အတွေ့အကြုံ ..oem / odm အမှာစာများကိုကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ r ကိုအတွက်ကြီးစွာသောအားသာချက်ရှိသည်&D, အထူးသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းဆိုင်ရာ safe တွင်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုစုဝေးစေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။